Xil-Wareejinta Maayarrada Dalka Iyo Halista Deyn-Wareejinta- Qalinka: Cali Cabdi Coomay | Foore News
Home Aragtida Dadweynaha Xil-Wareejinta Maayarrada Dalka Iyo Halista Deyn-Wareejinta- Qalinka: Cali Cabdi Coomay
Xil-Wareejinta Maayarrada Dalka Iyo Halista Deyn-Wareejinta- Qalinka: Cali Cabdi Coomay
Waxa lagu wadaa inay dhawaan bilaabmato xil-wareejintii Maayarrada caasimad-goboleeyada Soomaalilaan. Sidaasi darteed xil-wareejintaasi waxa ku lammaan halis ay tahay inay ka digtoonaadaan Maayarrada cusubi. Sida caadada ah inta badan masuuliyiin badan ayaa xil-wareejinta deymo culus wareejiya.
= Deyn-wareejinta- waa arrinta ugu khatarta badan ee ah fajida (Faji waa afka dhallinyaradan dambe oo ah shirqool dhagaraysan oo qof lagula kaco si loo fashiliyo) ee loogu talogalay in loo dhigo maayarrada cusub si aanay shaag u rogin shanta sanno ee muddo xiloodkooda. Deyntaasi waxa ay adhaxda jebinaysaa in maayarka cusubi uu shantiisa sanno qabto hawllo culus oo uu bulshada ku soo jiito ama ballanqaadiisii ahaa. Haddii uu deyntaasi lagu wareejiyey uu si xigmeydsan ula tacaali waayo, shantiisa sanno waxa ay kaga dhici doontaa inuu deyntaasi lagu dabray uu bixiyo. Deyntu waa laba nooc: 1. Mid ay ku leeyihiin shaqaalaha dawladdu oo mushahar u badan, taasina waa arrin mudan in lala wareego oo dadkaa xaqooda la siiyo. 2. Mid ay soo qortaan shirkado iyo shakhsiyaad sheeganaya inay dawladda hoos deyn ku leeyihiin, sidaasina uu Maayaarkii hore u soo wareejiyey.
Haddaba ta halist ahi waa tan, oo u baahan ka fiirsi wixii aan caddeyn loo haynin. Waxa aan xusuustaa mid ka mid ah wasiirradii maaliyadda Soomaalilaan ee ugu nadiifsanaa dhinaca musuq la’aanta ayuu wasiirkii ka horreeyey ku wareejiyey deyn ay leeyihiin shirkado iyo shakhsiyaad, kuwaasi oo hawllo ka duwan u qabtay dawladda dhexe. Wasiirkii ayaa xaddigii deynta muddo shan cisho ah darsayey, markii uu uu kala garan waayey siday run iyo been u tahay ayuu go’aankan qaataty. Wuxuu ballamiyey dhammaan madaxdii masuulka ka ahayd shirkdaha deynta ku leh dawladda iyo shakhsiyaadkii kale ee gaarka u soo qortay deynta.
Ka dib wuxuu la galay hoolkii wasaaradda, waxaanu soo qaatay kitaab Qur’aan ah oo mid kastana wuxuu ku yidhi dhaaro inaad dawladda lacagtan aad soo qortay ku leedahay. Markii kitaabkii la keenay hoolkii ayey tiro badani albaabka boobeen, ileyn been ku dhaaran maayaane. Waxa soo hadhay tiro yar oo daacad ah oo ay run ka ahayd deyntu kuwaasi ayaa dhaartii xagaf ku siiyey. 70% dadkii iyo shakhsiyaadkii deynta soo qortay meesha ayey ka baxeen. Dhacdadaasi waxa laga baran karaa in deynta ay shirkadaha iyo shakhsiyaadku soo qorteen ay intaada badani been tahay, oo ay dhici karto in maayarradii hore ay lacagta wax ku leeyihiin.
Cali Cabdi Coomay, Suxufi, qoraa ah.
Previous articleQaabkii Layaabka Lahaa Ee Loo Afduubay Xafsa, Taangi Biyood Oo Lagu Dhex Riday Iyo Qaabkii Ciidamadu Uga Soo Badbaadiyeen Afduubayaasha
Next article“KULMIYE Wuxuu Ka Gubtay Culimada Ka Hadashay Laaluushka Xaraanta Ah”..Xisbiga UCID